Draw Something Classic 2.400.059 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.400.059 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Draw Something Classic
Draw Something Classic ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
- Facebook: http:www.facebook.complaydrawsomething
တစ်ခုခုကို "ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး Drawing ဂိမ်း" ဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုဒူဒယ်အနုပညာဖလှယ်အတူပျော်စရာရှိသည်။ အနုပညာတစ်စုံလင်သောအလုပ်ပုံကြမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်။ သင့်ရဲ့ဖြီးတက် Pick နှင့်ယခုပန်းချီကိုစတင်ပါ။
•သင်ကဒီဂိမ်းနဲ့အတူပျော်စရာရှိသည်ဖို့အနုပညာကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်း, တုတ်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်သဘောဟာသကြိုဆိုကြသည်။
• Draw & Guess mode မှာအစွဲအလှည့်ကိုအခြေခံပြီးဆွဲဂိမ်းခံစားပါ။ ပုံကြမ်းများနှင့်အရောင်အဆင်းနှင့်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုပြ။
•အခြားအနုပညာရှင်တွေ Guess တစ်ခုခု mode မှာရေးဆွဲအရာကိုပုံပါဘဲ။
•ဆွဲရန်အသစ်နှင့် updated စကားများပြရန်! သိပ္ပံမှသည်ယဉ်ကျေးမှု Pop ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့အမိုးရရှိပါသည်။
•အလေ့အကျင့်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်အရောင်ကဒ်သော့ဖွင့်။ ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးပုံကြမ်းများနှင့်ပန်းချီအတွေ့အကြုံအတွက်သက်တံ့အပေါင်းတို့ကိုအရောင်အဆင်းတယ်, ပြီးတော့တချို့င့်!
သင့်ရဲ့ပန်းချီကြောက်မက်ဘွယ်လျှင်•ကြှနျုပျတို့က Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် featured Get ။
အသစ်ပြောင်းခြင်းများ, အင်္ဂါရပ်တွေ, ပြိုင်ပွဲနှင့်ပိုပြီးများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ!
- က Facebook: http:www.facebook.complaydrawsomething
- တွစ်တာ: @WeDrawSomething
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှု Zynga ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ (http:m.zynga.comprivacypolicy) မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
Draw Something Classic အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Draw Something Classic အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Draw Something Classic အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Draw Something Classic အား အခ်က္ျပပါ
Draw Something Classic ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Draw Something Classic အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.400.059
ထုတ်လုပ်သူ Kiragames Co., Ltd.
App Name: Draw Something Classic
Release date: 2019-09-14 04:11:11
လက်မှတ် SHA1: 23:01:DF:F8:D2:D1:C1:FD:84:25:D4:FC:8B:AC:EB:A9:97:9C:BA:D4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Stephen Nichols
အဖွဲ့အစည်း (O): "Retired Astronaut Collective
Draw Something Classic APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ